I-EIBOARD ye-LED Recordable Smart Whiteboard sisizukulwana samva nje semveliso yeklasi yedijithali yemultimedia, yenzelwe ngokukodwa ukunceda ukufundisa ngobuchule, ibhodi yokubhala yemveli edityanisiweyo kunye netekhnoloji yokunxibelelana yokunxibelelana ukwenza isisombululo esitsha sokufundela. Ngoyilo lokubhala olungenamthungo kunye nomphezulu omkhulu osicaba, yenza ukuba umxholo wokubhala webhodi emhlophe ube nomxholo we-imeyile kwaye ugcinwe ngokulula kwaye kulula. Ubukhulu obukhoyo yi-intshi eyi-146, i-162 intshi kunye ne-185 intshi.
I-EIBOARD LED Recordable Smart Whiteboard yingcamango entsha eyenzelwe isisombululo seklasi ehlakaniphile, leyo idibanisa ibhodi emhlophe yemveli, ibhodi esebenzisanayo kunye nepaneli yokuchukumisa ukwenza isisombululo esitsha.Yenza ukuba umxholo wokubhala webhodi emhlophe okanye ibhodi emhlophe ube nomxholo we-e kwaye ugcinwe ngokulula kwaye kulula. Ngoyilo lokubhala ngaphandle komthungo kunye nomphezulu omkhulu osicaba, yenza ukuba abasebenzisi abaninzi basebenze ngeendlela ezininzi zokusebenza ngaxeshanye. Abasebenzisi banokubhala ngomnwe, ipeni, abamakishi ngaxeshanye.
Kutheni iyilwe nje?
Ngaphambi kokuba sazi ibhodi emhlophe erekhodiweyo ye-LED, nceda ufunde ngezantsi ulwazi malunga nophuhliso lwesisombululo seklasi yemultimedia, emva koko uya kuyazi ukuba ivela njani ibhodi emhlophe erekhodiweyo ye-LED kwaye kutheni amagumbi okufundela eyidinga.
Ngaphambili, kukho uhlaziyo lwesizukulwana esi-4 seklasi yedijithali yemultimedia:
1. I-1st Generation yiklasi yedijithali yesiqhelo, efakwe kunye neSkrini seProjekthi, iprojektha, ikhompyutha yedesktop, ibhodi ebhodini okanye ibhodi emhlophe, iqonga kunye nezipikha. Isisombululo asisebenzi ngenxa yesikrini esichukumisayo, konke ukubonakalisa kunye nokusebenza kuxhomekeke kumlawuli, imouse yePC kunye nekhibhodi.
2. I-2nd Gen yiklasi yesiqhelo ehlakaniphile, efakwe kwi-interactive whiteboard, iprojektha, ikhompyutha okanye i-multimedia yonke-in-one PC,ibhodi ebhodini okanye ibhodi emhlophe. Isisombululo sisebenzisanayo, sichukumisa kaninzi, sanamhlanje kwaye sihlakaniphile. Isisombululo sasihlala kwimarike yemfundo ngaphezu kwe-15years, esamkelekileyo kwaye sithandwa, kodwa namhlanje sele sithatyathelwe indawo yimveliso yesizukulwana esitsha (i-LED interactive panel displays), kuba inkqubo idinga ubuncinane iimveliso ezi-4 ezifakwe ngokwahlukeneyo kwaye akukho HD yokujonga umbala. amava.
3. Isisombululo se-3 ye-Gen yi-LED ye-flat panel esebenzayo kunye nebhodi emhlophe okanye ibhodi emhlophe. Isisombululo sebhodi ye-smart yesi-3 sisonke, akukho mfuneko yeprojektha kunye nekhompyutheni yangaphandle edibeneyo, kulula ukuyifaka kunye nokusetyenziswa. Kodwa inkqubo isadinga iintlobo ezi-2 zeemveliso eziza kuthengwa kwaye zifakwe ngokwahlukileyo.
4. Isisombululo se-4th Gen yi-Nano smart boardboard, eyilwe yonke into, akukho mfuneko yokuthenga nayiphi na ibhodi yokubhala. Umphezulu wonke mkhulu kakhulu kwaye awunamthungo wokubhala ngetshokhwe. Kodwa ibhodi yebhodi ehlakaniphile ayikwazi ukurekhoda kwaye igcine amanqaku okubhala ebhodini, amanqaku ayacinywa emva kokubhala.
Isisombululo esitsha sesi-5 samva nje semultimedeia calssrooms:
Isisombululo se-5th Gen EIBOARD LED erekhodiweyo emhlophe emhlophe, oko ikukuthi esandula ukuyilwa kunye yokwenyani yonke-in-enye. Isombulula zonke iintlungu zentlungu ezingentla ze-4 kwaye idlula ukuguqulwa kwe-4 ngasentla.
Kukho iinguqulelo ze-4 ukususela kwi-V1.0 iqaliswe kwi-2018. I-V3.0 iqaliswe kwi-2020 ithandwa kwaye ibalulekile. I-V4.0 ezayo inamandla ngakumbi.
Ibhodi emhlophe erekhodiweyo ye-LED inayo yonke imisebenzi ye-Interactive Smart Board, Projection, School Chalkboard, LED Interactive Touch Displays, Nano blackboard, Speakers, Visualizer, Controller, Pen Tray, njl.
Ngaphandle kwemisebenzi engentla ibandakanyiwe, inoyilo olukhethekileyo:
I-1) Ibhodi emhlophe erekhodiweyo ye-LED inokurekhoda amanqaku okubhala ngesandla njengomxholo we-e kwiindlela ezininzi zokusebenza, kwaye ngokukhawuleza ukugcina.
2) Umxholo we-e ogciniweyo kulula ukwabelana ngawo nabafundi ukuba bawuphonononge, kwaye ulayishe kwiqonga lelifu lesikolo ukuze abazali bafundise abantwana ekufundeni.
3) Umphezulu wephaneli yokubhala yi-100% esebenzisanayo njengomgangatho omkhulu kakhulu, onoyilo olungenamthungo.
3) Umphezulu webhodi yokubhala ekhohlo nasekunene njengescreen esisezantsi, kukho iindidi ezininzi ozikhethelayo, umz. ibhodi yokumakisha, ibhodi yetshokhwe, ibhodi, ibhodi emhlophe, ibhodi eluhlaza njl njl.
4) Iphaneli ye-lcd ephakathi njengesikrini esiphambili sinokubhalwa njengombhalo womphezulu webhodi ngesiphawuli okanye ngetshokhwe, kwaye kulula ukuyicima.
5) Ubungakanani obukhoyo: 146inch, 162inch kunye ne185inch
Yintoni enye malunga ne-LED erekhodiweyo ye-Smat Blackboard?
Nayiphi na imveliso yokusetyenziswa kwemfundo kufuneka icinge ngawo onke amaqela kwicandelo lezemfundo. Ibhodi emhlophe erekhodiweyo ye-LED yenzelwe ukuba idlale indima ebalulekileyo kwimfundo kwaye ikwalithuba elitsha lemfundo yale mihla yemarike yokufundisa eklasini.
Amagumbi okufundela anamhlanje afuna into entsha nekhethekileyo ukwenza ukufundisa nokufunda kube lula kwaye kube lula, ukwenza izifundo zisebenze kakuhle.
Zonke iinkqubo zokufundisa zinokugcinwa kwaye kulula ukuphononongwa emva kweklasi ukunqanda ukuphosa amanqaku abalulekileyo.
Ingakumbi abafundi abakwinqanaba lamabanga aphantsi nelokuqala, bafuna uncedo lwabazali kumsebenzi wasekhaya. Iinkqubo zokufundisa ezirekhodiweyo nezilayishiweyo kwiqonga lelifu lesikolo kulula ukuba abazali bajonge ukuba abantwana babo bafunde ntoni ezikolweni kunye nendlela yokufundisa umsebenzi wesikolo wasekhaya.
Lo gama kusenziwa kakhulu ukongiwa kweendleko zemfundo, kunyuswa izinga lokusetyenziswa kwezixhobo ngootitshala, yaye kunyuswa kakhulu ixabiso lezixhobo zokufundisa ze-multimedia, izikolo zinethemba lokuba isibonelelo sokufundisa sootitshala abagqwesileyo kunokwabelwana ngaso size sifundwe ngabanye.
5) Kwi-MOE kunye noRhulumente
Uninzi lwezikolo kusenokwenzeka ukuba sele zifakile izisombululo zebhodi yedijithali yemultimedia kumagumbi okufundela. Kodwa uninzi lwazo lwafakelwa okokuqala lunoguqulelo olusisiseko ukonga iindleko, yonke le nkqubo yayingagqibelelanga kwaye yayingalungelanga, kwaye izinga lokusetyenziswa kootitshala lalingekho phezulu, nto leyo eyayiza kuthatha inkcitho. Ngaphezu koko, ezi zixhobo zinokuthi zifakwe ixesha elide, ezininzi zazo azisekho ukusetyenziswa kwaye kufuneka zilungiswe kwaye zitshintshwe. Kwamanye amagumbi okufundela, inkqubo yebhodi yedijithali yemultimedia kusenokwenzeka ukuba ayizange ifakwe, kwaye bafuna isisombululo esitsha esixabisekileyo nesisebenzayo. Uyilo lwebhodi emhlophe erekhodiweyo ye-LED inokusombulula ezi ngxaki. Inokwandisa ukongiwa kweendleko zemfundo, inyuse izinga lokusetyenziswa kwezixhobo ngootitshala, ize inyuse ixabiso lezixhobo zokufundisa zemultimedia.
6) KuBaboneleli ngeZibonelelo zeZikolo
Isisombululo esitsha esisodwa siyafuneka, kwiinzuzo zebhidi kunye nokuthengisa okulula. Umvelisi one-R&D eyomeleleyo kunye nomthamo wemveliso ufuneka kakhulu njengenkxaso.
Yiyo loo nto ibhodi emhlophe erekhodiweyo ye-LED ilithuba elitsha lemarike yemfundo.
Thina Iqela le-EIBAORD liya kuzama kangangoko kunye neenzame zokusebenzela imarike yemfundo, ukuphucula ibhodi yethu emhlophe erekhodiweyo ye-LED, kwaye siyithengise ngeyona nto ixabisekileyo kunye nokusebenza kakuhle.
Ngaphambili: I-Smart Blackboard FC-185EB
Okulandelayo: I-Smart Whiteboard FC-185EB
3572.8 * 122.81 * 1044 mm
Isikrini esiPhambili (H*V)
Isikrini esisezantsi (L*D*H)
Ubunzima (NW /GW)
Isikrini esiphambili Iiparamitha
Ubungakanani bePaneli ye-LED 75”, 85”, 98”
Ukhuselo lokubonisa Iglasi enobushushu bokumelana nokudubula yi-4 mm
Umabonakude (Ngokuzithandela) Ifomathi yomfanekiso:PAL/SECAM/NTSC (Ngokhetho) ; Ukugcinwa kwesiteshi 200
Iiparamitha zeSkrini esisezantsi
Uhlobo lwebhodi yebhodi Ibhodi eluhlaza, ibhodi emhlophe, ibhodi emhlophe njengokuzikhethela
Iindlela ezimfutshane 9 Iindlela ezimfutshane zokusebenza ngokulula:Ukwahlula isikrini, iPeni eBlue, iPeni eBomvu, iPhepha elitsha, iPhepha lokuGqibela, iPhepha elilandelayo, isitshixo seBhodi, iRekhodi yeMemori, ikhowudi yeQR
Isixhobo Sokubhala Itshokhwe, isiphawuli, umnwe, ipeni okanye naziphi na izinto ezingacacanga
Inkqubo yokwenza Inkqubo ye-Android I-Android 6.0
CPU (Iprosesa) I-CORTEX A53 Quad Core 1.5GHz
Ugcino RAM 2GB ; I-ROM 32G;
Ugcino Imemori: 8G (4G/16G ngokuzithandela); I-HDD: 256G SSD (128G/512G/1TB ngokuzithandela)
Izinto zokuchukumisa Isikrini esiphambili kunye nesikrini esisezantsi sinokusebenza ngaxeshanye.
Amandla aphezulu ≤300W ≤400W ≤450W
Amazibuko angaphambili USB2.0*3,HDMI*1,Touch USB*1
Amazibuko angasemva HDMI*1,VGA*1,RS232*1,Audio*1,MIC*1,Earphone*1,USB2.0*4,RJ45 IN *1,RJ45 OUT *1,OPS Slots*1
Amaqhosha omsebenzi Amaqhosha ayi-8 kwi-bezel engaphambili: Amandla, uMthombo, iMenu, uMqulu+/-, iKhaya, iPC, i-Eco
Izincedisi Intambo yamandla * iipcs ezi-1; Ipeni yokuchukumisa*1 iipcs; Umlawuli okude * 1 iipcs; Ikhadi le-QC * iipcs ezi-1; Incwadi yemiyalelo *1 iipcs ; Ikhadi lewaranti * iipcs ezi-1; Izibiyeli zodonga*1 iseti
Ibhodi ye-Led eRekongekayo ye-Smart
Ibhodi yeNano Smart